မောင်မိုးသူ | MoeMaKa Burmese News & Media | Page 2
မောင်မိုးသူ ● ယူနန်နယ်စပ် ဝမ်စွေ့ဝမ်စွေ့နှင့် ဘကြီးမိုး (မိုးမခ) စက်တင်ဘာ ၂၀၊ ၂၀၁၇ မိုးမခ အတွဲ ၄၊ အမှတ် ၇၊ ဇူလိုင် ၂၀၁၇ ထုတ်မဂ္ဂဇင်းမှ ဖြစ်သည်။ ဘကြီးမိုးက...
Illustration – Zaw Maung မောင်မိုးသူ – အစိုးရသစ်နှင့် ယန္တရားအဟောင်း (ကုမုဒြာဂျာနယ်၊ ရန်ကုန်) မိုးမခ၊ ဇူလိုင် ၂၅၊ ၂၀၁၇ ပြည်သူ့ဆန္ဒနဲ့ ပြောင်းလဲချိန်တန်ပြီဆိုတဲ့ အစိုးရသစ်ဖွဲ့စည်းနိုင်ဖို့ ဆန္ဒမဲတစ်ခဲနက်ပေးခဲ့ကြလို့...
နိုင်ငံတကာနှင့် နိုင်ငံတော် အတုိုင်ပင်ခံ ပုဂ္ဂိုလ် – ဘကြီးမိုး
နိုင်ငံတကာနှင့် နိုင်ငံတော် အတုိုင်ပင်ခံ ပုဂ္ဂိုလ် – ဘကြီးမိုး (ကုမုဒြာဂျာနယ်၊ ရန်ကုန်) မိုးမခ၊ ဇွန် ၉၊ ၂၀၁၇ ဇွန်လ ၃ ရက်နေ့တွင် နိုင်ငံတော် အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်သည် ရန်ကုန်မြို့ ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီးတွင်...
နှစ် ၈၀ ပြည့် အမှတ်တရနှင့် မောင်မိုးသူ (ကုမုဒြာဂျာနယ်) မိုးမခ၊ မေ ၂၄၊ ၂၀၁၇ မေလ ၁၇ ရက်နေ့မှာ မောင်မိုးသူ အသက် ၈၀ ပြည့်ပါတယ်။ မောင်မိုးသူတို့ ၈၀...
ဆွေမျိုးပေါက်ဖော် အနာဂတ် နှင့် ဘကြီးမိုး
ဆွေမျိုးပေါက်ဖော် အနာဂတ် နှင့် ဘကြီးမိုး (ကုမုဒြာဂျာနယ်၊ ရန်ကုန်) မိုးမခ၊ မေ ၁၉၊ ၂၀၁၇ ဘကြီးမိုးတို့ မြန်မာနိုင်ငံဟာ အနောက်ဘက်မှာ ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်၊ အိန္ဒိယ၊ အရှေ့ဘက်မှာ တရုတ်၊ တောင်ဘက်မှာ ကမ္ဘောဒီးယား၊...
ဘကြီးမိုးပုံတူပန်းချီကား၊ မိုးမခမေလထုတ် အဖုံး၊ ရေးဆွဲသူ ပန်းချီမမွှေး ဘာသာပြန် နှင့် ဘကြီးမိုး (ကုမုဒြာဂျာနယ်) မိုးမခ၊ မေ ၁၁၊ ၂၀၁၇ ဘကြီးမိုး မေလ ၁၇ ရက်နေ့မှာ အသက် ၈၀...
မိုးနတ်မင်းကယ်ပါနှင့် မောင်မိုးသူ (ကုမုဒြာဂျာနယ်) မိုးမခ၊ မေ ၈၊ ၂၀၁၇ မောင်မိုးသူက သတင်းသမားမဟုတ်လား။ အချိန်ပြည့် သတင်းတွေကို ဖွင့်ကြည့်နေတာ။ နောက်ဆုံးရောဂါဖြစ်တဲ့ လူမှုကွန်ရက်ဆိုတဲ့ ဖေ့စ်ဘုတ်ခ်ကိုတော့ မောင်မိုးသူ မကြည့်ဘူးခင်ဗျ။ သုံးလည်း မသုံးဘူး။ ကြားရတဲ့သတင်းတွေနဲ့ပဲ...
ခေတ်ဟောင်းက အညစ်အကြေးကို အတာရေနဲ့ဆေးပါ့မယ် နဲ့ ဘကြီးမိုး
ခေတ်ဟောင်းက အညစ်အကြေးကို အတာရေနဲ့ဆေးပါ့မယ် နဲ့ ဘကြီးမိုး (ကုမုဒြာဂျာနယ်၊ ရန်ကုန်) မိုးမခ၊ ဧပြီ ၂၀၊ ၂၀၁၇ သင်္ကြန်အခါတော်ပေ x x ရက်မြတ် မှာလေ x x လှပျိုဖော်တစ်သင်းနှင့်...
သူ့ခေါင်းမှာတဲ့ သပြေညို ငါ့ခေါင်းမှာတဲ့သပြေညို သပြေညို ရွှေဘိုပန်းရယ်က လန်းလျက်ပါ ကို ……. နှင့် မောင်မိုးသူ (ကုမုဒြာဂျာနယ်၊ ရန်ကုန်) မိုးမခ၊ ဧပြီ ၁၄၊ ၂၀၁၇ သပြေညို “ကဗျာကတော့ မောင်မိုးသူ...
သေနတ်သံများကြားက ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့် မောင်မိုးသူ (မြန်မာသံတော်ဆင့်ဂျာနယ်၊ ရန်ကုန်) မိုးမခ ၊ မတ် ၁၅၊ ၂၀၁၇ ၂၁ရာစု ပင်လုံငြိမ်းချမ်းရေးညီလာခံကို ၂၀၁၇ခု မတ်လတွင် ပြုလုပ်ကျင်းပမည်ဟု ကြိုးစားနေကြပါ တယ်။ လူမျိုးစုအလိုက်ဆွေးနွေးပွဲများလည်း...
စာရေးဆရာလုပ်တော့မှာလား နှင့် ဘကြီးမုိုး
စာရေးဆရာလုပ်တော့မှာလား နှင့် ဘကြီးမုိုး (ကုမုဒြာဂျာနယ်၊ ရန်ကုန်) မိုးမခ၊ မတ် ၇၊ ၂၀၁၇ ­ဘကြီးမိုးရဲ့ တစ်သက်လုံး၊ တစ်ဘဝလုံး စာရေးဆရာလုပ်ခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ မှန်ပါတယ်။ ရုပ်ရှင်ရိုက်ဖူး၊ နိုင်ငံရေးလုပ်ဖူး၊ ပန်းချီဆွဲဖူးတာမှန်ပေမဲ့ အမြဲတမ်း...
ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုတည်ဆောက်ရေးနှင့် မောင်မိုးသူ (မြန်မာသံတော်ဆင့်ဂျာနယ်) မိုးမခ၊ မတ် ၁၊ ၂၀၁၇ အားလုံး အားလုံးသော ပုဂ္ဂိုလ်များ အဖွဲ့အစည်းများအားလုံးက ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စု တည်ဆောက်ကြဖို့ ပြောနေကြတယ်ခင်ဗျ။ ၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံမှာလည်း ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုတည်ဆောက် ရမယ်လုိ့ပါသတဲ့။...
မောင်မိုးသူ ● ကလေးတွေရဲ့ အင်တာနက်ထဲကအန္တရာယ်နှင့် မောင်မိုးသူ (မိုးမခ) ဖေဖော်ဝါရီ ၂၂၊ ၂၀၁၇ မြန်မာနိုင်ငံမှာ တယ်လီဖုန်း၊ အင်တာနက်ဆက်သွယ်ရေးဟာ အတော့်ကိုတိုးတက်လာခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။ လောလောဆယ် မှာပင် လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်နေကြတဲ့ အော်ပရေတာ သုံးဖွဲ့ (အမ်ပီတီ၊...
MICA ကို ဘာ့ကြောင့်ဖျက်သိမ်းသင့်တာလဲနှင့် မောင်မိုးသူ (မြန်မာသံတော်ဆင့် ဂျာနယ်၊ ရန်ကုန်) မိုးမခ၊ ဖေဖော်ဝါရီ ၁၆၊ ၂၀၁၇ နိုင်ငံတော်၏သားငါးကဏ္ဍ တိုးတက်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရန်နှင့် စားနပ်ရိက္ခာဖူလုံစေရန် ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် ဖွဲ့စည်းခဲ့သည့် MICA သည် ပွင့်လင်းမြင်သာမှုမရှိခြင်း၊...
ပြောကို မပြောချင်ဘူး နှင့် မောင်မုိုးသူ (ကုမုဒြာ ဂျာနယ်၊ ရန်ကုန်) မိုးမခ၊ ဖေဖော်ဝါရီ ၁၁၊ ၂၀၁၇ ကမ္ဘာကျော် ပုံလေးသုံးပုံ ရှိပါတယ်။ မျက်စိပိတ်ထားလို့ မမြင်လိုဘူးပေါ့။ နားကို ပိတ်ထားလို့ မကြားလိုဘူးပေါ့။...
လုံခြုံရေးဟာ ဘယ်သူ့တာဝန်လဲနှင့် ဘကြီးမိုး
လုံခြုံရေးဟာ ဘယ်သူ့တာဝန်လဲနှင့် ဘကြီးမိုး (မိုးမခ) ဖေဖော်ဝါရီ ၈၊ ၂၀၁၇ ဇန်နဝါရီ ၂၉ ရက်နေ့က မင်္ဂလာဒုံ လေယာဉ်ကွင်း အငှားယာဉ်များ ရပ်နားရာရှေ့တွင် အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ ချုပ် ဥပဒေအကြံပေးပုဂ္ဂိုလ် ဦးကိုနီ သေနတ်နဲ့...
ရသစာပေ နှင့် ဘကြီးမိုး
ရသစာပေ နှင့် ဘကြီးမိုး (ကုမုဒြာ ဂျာနယ်၊ ရန်ကုန်) မိုးမခ၊ ဖေဖော်ဝါရီ ၄၊ ၂၀၁၇ ဘကြီးမိုးဘဝမှာ ရသစာပေနဲ့ စတင်ကြီးပြင်းလာရတယ်လို့ ဆိုချင်ပါတယ်။ ကြီးကြီးကျယ်ကျယ်ပြောရရင် ရသစာပေ တောင်မှ ဂန္ထဝင်ရသဘာသာပြန်စာပေနဲ့စတင်ရင်းနှီးရတာ...
မောင်ဝဏ္ဏ+ချိုရည်တို့ရဲ့ ဆွမ်းကပ် နှင့် ဘကြီးမိုး (ကုမုဒြာဂျာနယ်၊ ရန်ကုန်) မိုးမခ၊ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၊ ၂၀၁၇ မောင်ဝဏ္ဏဆိုတာ ဘကြီးမိုးရဲ့ ညီငယ်လို ချစ်ရတဲ့ ရုပ်ရှင်ဒါရိုက်တာ မောင်ဝဏ္ဏဖြစ်ပါတယ်။ ချိုရည်က သူ့ဇနီးပါ။ မောင်ဝဏ္ဏက...
ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စု တည်ဆောက်ရေးနှင့် မောင်မိုးသူ (သံတော်ဆင့်ဂျာနယ်၊ ရန်ကုန်) မိုးမခ၊ ဇန်န၀ါရီ ၃၁၊ ၂၀၁၇ မြန်မာ့တပ်မတော်မှ အမြဲကိုးကားလေ့ရှိသော ၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေတွင် ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စု တည်ထောင်ရေးဟု ပါရှိပါတယ်၊ ထိုနည်းတူ လက်နက်ကိုင်လူမျိုးစုများ ကလည်း...